🥇 ▷ Sida loo xasuusto xusuusta iPhone iyo Android ✅
Sida loo xasuusto xusuusta iPhone iyo Android
Marka ku xigta xogta mobilada iyo batteriga, Meesha xusuusta laga heli karo Telefoonkaaga casriga ahi waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aad la tacaasho waqti ka waqti. App Store iyo Google Play Waxay ka buuxaan dalabyo iyo ciyaaro aad rabto inaad isku daydo, tanina waxay kaa dhigeysaa inaad si dhakhso ah ama hadhow udhameyso booska.
Oo ka waran isticmaalka degdega ah ee barnaamijyada sida WhatsApp, kaas oo taleefanka naga buuxiya sawirro iyo fiidiyowyo. Sawirro iyo muuqaallo aan sameyno oo aan ku sii hayno taleefanka casriga illaa kaydinta ayaa ka dhammaata.
Inta kombiyuutaro badan oo hagaagsan sida aan nahay, waqtiba waqti ayaa aan ku qasbeynaa inaan sameyno nadiifinta dhijitaalka ah of our iPhone ama telefoonka Android si loo fududeeyo oo loo soo celiyo meel bannaan. Si tan loo sameeyo waa inaad raacdaa qaar ka mid ah habab fudud, xeelado ama talooyin aan hoos ku sharaxnay.
Raadi isha dhibaatada
Bilow inaad tirtirto waxyaabaha bilaa ton ah ama way caawin karaan, laakiin nasiib ayaanu nahay. Way ka sahlan tahay hubso waxa dhibku yahay, maxaa ka dhigaya meesha banaan ee ku jirta xusuusta iPhone-kaaga ama Android-ka inay yarayso mararka qaar.
Labadaba Android iyo macruufka waxay leeyihiin qalab u gaar ah oo noo sheegi doona sida aan u xun nahay inaan u dhinno, ama kiiskan, taas oo codsiyaduhu fadhiyaan meelo badan. Android waxaan ka heli doonnaa Dejinta> Kaydinta. Waxay noo sheegi doontaa boqolleyda xusuusta la adeegsaday, meesha bannaan ee xusuusta weyn iyo kaarka SD, iyo adoo gujinaya kaydinta gudaha waxaan arki doonnaa sida ay xusuustayadu u sii socoto.
Macruufka dhexdiisa, waxaan ka heli doonnaa aalad la mid ah gudaha Dejinta> Guud> Kaydinta. Waxaan ogaan doonnaa booska ay ku shaqeeyaan codsiyo, waxyaabaha ku duuban warbaahinta, iwm, iyo sidoo kale dalabyada buuxiya boos badan.
Meel bilaash ah, hab otomaatig ah
Habka ugu dhaqsaha badan uguna toos ah ee lagu helo boos badan oo laga heli karo taleefankaaga casriga, haddii aad haysatid Android, waa adigoo riixaya batoonka Meel banaan ku keydi maxaad ka heli doontaa Dejinta> Kaydinta> Kaydinta Gudaha ama wixii lamid ah. Android ayaa raadin doonta alaabtii hore sida sawirro, fiidyowyo, faylal iyo codsiyo si aad go’aan uga gaarto haddii aad rabto in aad tirtirto. Haddii aadan helin wax, waxay kuu soo jeedin doontaa inaad tirtirto waxyaabaha dhowaan.
On macruufka, ka Dejinta> Guud> Kaydinta Waxaan haynaa labo xalal deg deg ah si aan u helno boos badan. Tan koowaad waxay ka kooban tahay Kor u qaad sawirrada, ama wixii lamid ah, iPhone-kaaga ama iPad-kaaga ayaa sawiradaada u soo bandhigi doona iCloud oo kaga tagi doona nuqul la habeeyay, oo ka yar cabbir, qalabkaaga. Marka labaad, waan awoodnaa Ku rakib barnaamijyadooda aan la adeegsan, geedi socod otomaatig ah kaas oo shaqeyn doona markii nalagu soo haray meel bannaan. Waxay tirtiri doontaa barnaamijyada iyo cayaaraha laakiin waxay sii hayn doontaa faylasha iyo dejimaha.
Meel bilaash ah, habka gacanta
Waqtigan xaadirkaan waxaan falanqeyney xusuusta taleefankayaga casriga ah si aan u ogaano waxa kujirta meela badan. Waxaan sidoo kale ku tijaabinay xalalka otomatiga ah ee ay bixiyaan macruufka iyo Android. Hadda waa waqtigii loo tegi lahaa xalalka gacanta.
Marka hore, codsiyada iyo cayaaraha. Runtii ma waxaan u baahanahay waxaan oo dhan ku rakibnay? Ma u bedeli karnaa app ah nooca shabakadiisa haddii aan u isticmaalno bishii mar ama wax ka yar? Xaaladdaas markay tahay, Android-ka waan awoodnaa tirtir codsiyada gaboobay labada ka Dejinta> Kaydinta> Kaydinta Gudaha sida ka Google Play> Liistada dhinaca bidix> Barnaamijyadayda iyo cayaaraha> Waxaa la dhejiyay. Waxaan ku arki doonnaa liistada leh booska midkastaba leh. Miiraha waxaan ku kala saari karnaa liistadaas adeegsiga ugu dambeeya ama cabirka. Adoo gujinaya barnaamij kasta ama ciyaar walba waxaan arki doonnaa tabkiisa iyo badhankiisa Koronto.
On iPhone iyo iPad, waxaan si toos ah uga dhex ridi karnaa barnaamijyada iyo cayaaraha Dejinta> Guud> Kaydinta. Haddii aan mid walba riixno, waan arki doonnaa doorashada Qalabka ka-saar Aniga Tirtir xogta. Xaaladda labaad, waxaan ka takhalusi doonnaa dukumiintiyada, faylasha iyo xogta uu soo saaray dalabkaas. Khibrad ahaan, way fiicantahay in gacanta laga tirtiro xogtaas, laga bilaabo barnaamijka laftiisa, si aysan u tirtirin dukumiinti muhiim ah, sawir ama fiidiyow adiga oo aan dooneynin.
Nadiifi sawirada iyo fiidiyowyada
Iyagoo la raacaya codsiyada iyo cayaaraha, sawirrada iyo fiidiyowyada ayaa ah cunsurrada ugu badan ee ku dhex jira xusuusta taleefankaaga casriga ah. Dib u eegis fudud Waxay naga caawin doontaa inaan aragno inay jiraan fiidiyooyin iyo sawirro aan sameyn karno la’aanteed. Hadana hadaan helno shey aan rabno inaanu haysanno, waxaan fursad u heysanaa inaan ku hayno taleefankeena casriga ah ama aan darbiga ugu gelino.
Laga soo bilaabo Android, waxaan ka eegi karnaa sawirrada iyo fiidiyoogayaga dalabka Diiwaannada, kaas oo horay loogu soo dejiyay noocyadii ugu dambeeyay ee Android. Halkaas ayaan ku arki doonnaa waxa ku kaydsan oo ay habeeyeen sawirro, maqal, muuqaallo iyo dukumiintiyo. Oo haddii aan gujineyno menu dheeraad ah oo ku yaal geeska kore ee midigta sare, waxaan ku shaandheyn karnaa natiijooyinka adigoo gujinaya Kala saar… ka dibna xulashada ikhtiyaarka aad rabto: magac, taariikhda la daabacay, cabir ahaan… Kadib waxaan ubaahanahay kaliya inaan doorano shey kasta ka dibna riix astaamaha qaab Qashin-qub.
Laga soo bilaabo macruufka, sawirrada iyo fiidiyowyada ayaa laga heli karaa barnaamijka Sawirro. Ha ku khaldin sawirrada Google. Sawirrada waxaan ku arki doonaa dhammaan waxyaabaha aan ku abuurnay ama ku keydisay halkaas. Jaleec ayaa naga caawin doonta ka hel fiidiyowyo iyo sawirro taasi runtii umay muuqan wax fiican laakiin waxaan ilaaway inaan cirib tirno maalintiisa.
Iyada oo la adeegsanayo xeeladaha aan ku aragnay maqaalkan waxaan ku guuleysan laheyn inaan helno meel bannaan oo aan ku sii wadno xilli wanaagsan. Sida iska cad, waxaa jira waxyaabo badan oo aan sameyn karno hel xusuusta badan ee kaydinta. Waxa ugu daran, tusaale ahaan, waa in la sameeyo blur oo dib loo soo celiyo taleefanka, laakiin waxaa lagugula talinayaa in la sameeyo a Google Drive ama gurmad iCloud ah, waxay kuxirantahay inaad isticmaasho Android ama macruufka.
Talooyinka kale waa nadiifinta gudaha barnaamijyada buuxiya boos badan, sida tusaale FacebookMessenger Instagram, WhatsApp, Snapchat ama Telegram. Xaqiiqdi waad aragtaa inaad haysato sawirro iyo muuqaallo nuqul ah, sheekaysiga laga tagay in ay fadhiyaan meel bannaan iyo etetera dheer.